ကျွန်တော် ကျောင်းသားဘဝမှာ လယ်တီကျောက်စာတိုက်က ဆောက်နေဆဲဆိုတော့ ခဲတွေ အုတ်တွေ စလင်းကျောက်တွေ သဲတွေပေါတယ်။ တချို့နေရာတွေမှာ ရေညှိတက်နေတယ်။ ထမင်းစားကျောင်းဆင်းချိန်က တနာရီ။ အိမ်ကနေ ကမန်းကတမ်းပြန်လာကြတာ။ ခဲလုံးသေးသေးလေးတွေကို ခါးပုံထဲထည့်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေ တယောက်ကိုတယောက် ပစ်ကြတယ်။ ကျောက်စာတွေကို အကာအကွယ်ယူကြရတယ်။ အပျော်ပါဘဲ။ ပုံထဲကနေရာမှာ အရင်က အဆောက်အဦ မရှိသးဘူး။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
Baking Soda Uses & Remedies မုန့်ဖတ်ဆိုဒါ အသုံးဝင်ပုံများ
မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါကို ဓာတုဗေဒလို ဆိုဒီယမ် ဘိုင်ကာဗွန်နိတ်ဖြစ်တယ်။ မုန့်လုပ်ရာမှာသာမက အသုံးကျတာတွေက များလှတယ်။ အစွန်းတွေဖယ်နိုင်တယ်။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်နိုင်တယ်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမှာလည်း သုံးနိုင်တယ်။ ဗိုက်နာတာသုံးတာတော့ အတော်များများသိတယ်။ အက်စစ်ဓါတ်ကို ပျယ်စေလို့ပါ။ ချောင်းဆိုးတာနဲ့ လည်ချောင်းနာတာတွေမှာလည်း သုံးနိုင်ပါသေးတယ်။ မှိုပိုးတွေ၊ ပါရာဆိုက်တွေကိုလည်းနိုင်တယ်။ ဂေါက်ကြောင့် နာတာကိုလည်း သက်သာစေနိုင်တယ်။ ဆီးလမ်းပိုးအတွက်လည်းသုံးတယ်။ 1. Natural Deodorant သဘာဝနည်းနဲ့ အနံ့ပျယ်စေတယ်။ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်းနဲ့ရေရောပြီး ခပ်ပြစ်ပြစ် လုပ်သုံးရတယ်။ ချိုင်းနဲ့ ခြေထောက်လိမ်းရတယ်။ 2. Face Exfoliator မျက်နှာအရေပြားခြောက်သွေ့နေတာတွေကိုဖယ်ရှင်းပေးနိုင်တယ်။ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်းနဲ့ ရေတခွက်ရောပြီး မျက်နှာကိုလိမ်းပါ။ 3. Hand Softener လက်ကိုလည်းပျော့စေတယ်။ အညစ်အကြေးနဲ့ အနံ့အသက်တွေဖယ်ရှားပေးမယ်။ ရေနွေးနဲ့ ရောသုံးပါ။ 4. Feet Soother ခြေဖဝါးနူးညံ့စေတယ်။ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်းနဲ့ရေနွေးနဲ့ရောပါ။ ဗက်တီးရီးယားတွေ မှိုပိုးတွေရှင်းပေးတယ်။ 5. Itchy Skin Relief အရေပြားယားတာသက်သာစေမယ်။ နေလောင်တာ၊ အလာဂျီဖြစ်တာ သက်သ
မဟာလယ်တီ ကျောက်စာပါ မြန်မာစာ
တ လား တစ်လား သတိပြုပါ။ လယ်တီကျောက်စာတွေ ရေးထွန်းနေစဉ်က ကျွန်တော်က အနီးအနားမှာရှိတဲ့ စတိတ်တူး ခေါ် အထက (၂) များကျောင်းသား။ ၅ တန်းကနေ ၁၀ တန်းအထိ။ ကျောင်းသွားကျောင်းပြန် လယ်တီကျောက်စာတိုက်ထဲကနေဖြတ်ရတယ်။ တခါတခါ ခဲစစ်တိုက်တမ်းကစားကြတယ်။ တခါတလေ ကျောက်စာချပ်တွေမှာ ဆောက်ခုံးလေးနဲ့ စာတွေ ရေးထွင်းနေတာကို ထိုင်ကြည့်တယ်။ မင်နက်နဲ့အရင်ရေးရတာ။ လယ်တီဆရာတော်စာအုပ်တွေ ပြန်ထုတ်ကြတော့ ပေါ်လစီသတ်ပုံတွေဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်တော်က အခြေအမြစ်ကစ သိလို့ ပြောနေတာ။ တကြိမ်သာကျကုန်၏။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၂-၅-၂၀၁၈ ၂-၅-၂၀၂၁
၁။ ဆရာ မင်္ဂလာပါ သမီးကိုယ်ဝန်က ၂၅ ပတ်ရှိပါပြီ ကလေးက ​ဗိုက်ရဲ့ဘယ်ဘက်အောင့်နားမှာဘဲနေနေပါတယ် ကလေးကလှုပ်တော့လှုပ်ပါတယ် အာထရာဆောင်းရိုက်တော့ ကလေးက ဆုံပိုင်းလို့ပြောပါတယ် ညဘက်အိပ်တဲ့အခါ ဘယ်ဘက်ကိုအရမ်းစောင်းမအိပ်ရဲပါဘူး အိပ်မိရင်လဲ တခုခု ခံနေသလိုခံစားရမိလို့ ကလေးထိခိုက်တာမျိုး ဖြစ်မှာစိုးလို့ ညာဘက်ဘဲစောင်းအိပ်ဖြစ်ပါတယ် စိုးရိမ်ရပါသလားဆရာ မွေးခါနီးရင် ကလေးအနေအထားပြောင်းသွားနိုင်ပါသလားဆရာရှင့် ၂။ ဆရာရှင့် ကျမအသက်က ၃၄နှစ်ပါ။ ကိုယ်ဝန် ၃၈ပတ်ထဲမှာပါ။ ၂၄ပတ်မှာ USG ရိုက်တော့ ကလေးက ခေါင်းအောက်ဘက်ရောက်နေပြီ အနေအထားမှန်တယ်ဆိုလို့ ရိုးရိုးမွေးဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်။ အိုဂျီကလဲ ရိုးရိုးမွေးဖို့အဆင်ပြေတယ်ပြောထားပါတယ်။ အခု ၃၇ ပတ်မှာ ထပ်ရိုက်ခိုင်းလို့ရိုက်ကြည့်တော့ ကလေးက ဆုံပိုင်းဖြစ်နေတယ်ဆရာ။ အိုဂျီနဲ့ကနောက်ငါးရက်နေမှတွေ့ရမှာပါ။ ကလေးပြန်ပြီး လှည့်နိုင်သေးလား သိချင်တာပါဆရာ။ မလှည့်တော့ရင်ရော ခွဲမွေးမှအဆင်ပြေမလားဆရာ။ ကျေးဇူးပြု၍ ဖြေကြားပေးပါရှင့်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။ ၃။ ဆရာ ကျွန်မအသက် ၂၈ နှစ်ပါ။ ကိုယ်ဝန် အပတ် ၃ဝပြည့်ပါပြီရှင့်။ ကလေးက breech ဖြစ်နေတယ်လို့ ပြောပါတယ်ရှင့်။ ကျွန်မက ခွဲရမှာ အရမ်းကြောက်ပါတယ်။ ကလေးပြန
Happy birthday မွေးနေ့
ဆရာနဲ့ အန်တီအေးတို့အတွက် ရန်ကုန်ကနေအခမဲ့ကူလီထမ်းသူ တူမမွေးနေ့အတွက် ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်။ နေကောင်းပါစေ။ နယူးဒေလီ ဂျနတ်ပူရီ ဒိစထရိတ်စင်တာ စားသောက်ဆိုင်ထဲကလူတွေ ၈ နှစ်တိတိပိုပြီး အသက်ကြီးကြပြီ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ + ဒေါ်မြမြအေး ၁-၆-၂ဝ၁၃ ၁-၆-၂၀၂၁
ကျွန်တော်ငယ်စဉ်က ကျောင်းသွားကျောင်းပြန် နားခိုရာညောင်ပင် ရှင်သန်နေဆဲ။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်က ဒီရက်မှာရောက်တော့ တယောက်ကိုတယောက် မှတ်မိကြတယ်။ မင့်ပခုံးမှာ လွယ်အိတ်မပါပါလားတဲ့။ ကျောပိုးအိတ်တလုံးနဲ့ ထွက်ပြေးရကတည်းက စာအုပ်တွေနဲ့ ဝေးသွားတယ်။ ပြန်လာတော့ ကျောက်စာလောက်သာ ဖတ်တတ်တော့တယ်။ နောက်စာအုပ်တွေက ဗိုလ်ခေတ်မှာ သတ်ပုံပြောင်းကုန်ကြတယ်မဟုတ်လား။ သူတို့က လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီးထက် စာပိုတော်ကြလား ပြောစမ်းပါဦး ညောင်ပင်ကြီး။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၁-၆-၂ဝ၁၈ ၁-၆-၂ဝ၂၁
တမိုက်သာသာ တထွာမရှိတရှိ၊ ကိုယ်စိုက်ပျိုးထာတဲ့ သစ်ပင်ပန်းပင်လေးတွေကို အရိပ်တကြည့်ကြည့်။ ကိုယ့်သားသမီး မြေးမြစ်တွေကိုလည်း အရိပ်တကြည့်ကြည့်။ အရိပ်အခြေကြည့်ဆိုတာ အခြေအနေကို အကဲခတ်နေတာ။ အရိပ်အကဲကြည့်ဆိုတာ လူတဘက်သားကို အကဲခတ်နေတာ။ အရိပ်နေနေ အခက်ချိုးချိုးဆိုတာ ကိုယ်မှီခိုအားထားရာကို ကျေးဇူးကန်းတာ။ အတိတ်၏အရိပ်ဆိုတာ ဖြစ်ပြီးခဲ့တာတွေရဲ့ အကျိုးဆက်တွေ။ အရိပ်ခိုစားတယ်ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်မစွမ်းဆောင်ပဲ တပါးသူလုပ်ကိုင်ကျွေးမွေးထာတက်ု ထိုင်စားတာ။ အရိပ်မနင်းကောင်းဆိုတာ လေးစားကိုးကွယ်သူရဲ့အရိပ်ကို အမြတ်တနိုးထားတာ။ အရိပ်အရောင်ဆိုတာ ထင်ထင်ရှားရှားမဟုတ်ဘဲ ဝိုးတဝါးသာ မြင်ရတာ။ အရိပ်အရောင်ပြဆိုတာ တစုံတခုကို စဉ်းစားပြီးသိစေအောင် ပြသတာ။ ရွှေလမှာ ယုန်ဝပ်လို့ ဆန်ဖွပ်တဲ့ အဖိုးအို ဟောကြည့်ပါဆို ဆိုသာဆို ပိုမိုတဲ့စကား ကလေး အငိုတိတ်အောင် အရိပ်အရောင်ပြတယ် ဖိုးလနတ်သား။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၁-၆-၂၀၂၀ ၁-၆-၂၀၂၁
လွန်ခဲ့တဲ့ လေးနှစ်က အဖွါးနဲ့ မြေးနှစ်ယောက် အိမ်နားကစာကြည့်တိုက်မှာ နွေရာသီ စာဖတ်အစီအစဉ်ကို သွားကြတယ်။ အပြန်မှာ ဝမ်းသာအားရ ခူးလာကြတာက ပိုးစာရွက်။ နေ့လည်စာမှာ ရေနွေးနဲ့ဖျောပြီး ငါးပိကြော်နဲ့ စားပါတယ်။ အငန်ရှောင်တဲ့ အန်တီနဲ့ ကျန်တဲ့သူတွေက ဆန်မှုံ့နဲ့ကြော်စားကြတယ်။ ကျွန်တော်က အညာဒေသမှာမွေးခဲ့နေခဲ့လို့ ပိုးစာပင်ဆိုတာ စာအုပ်ထဲမှာသာ ဖတ်ဖူးခဲ့တယ်။ တိုင်းပြည်ကနေ ထွက်ပြေးရပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်၊ အိုက်ဇောမြို့အစွန်က အိမ်ကလေးတလုံးမှာ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့က ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူ ၆ လကြာနေခဲ့ကြရတယ်။ စားစရာရော သောက်စရာ၊ ရေပါ ခက်ခဲတဲ့ကာလ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆင်းအတက် နာရီဝက်လောက် ပိုးစာခြံကို ဖြတ်ပြီး၊ ရေခပ်ရေချိုး ဆင်းကြရတယ်။ ဟင်းချက်စရာဝယ်ဖို့ ပိုက်ဆံမရှိတိုင်း ပိုးစာရွက်ကို စားကြရတယ်။ အသီးမှည့်လည်း စားကောင်းတယ်။ Mulberry lane ခေါ် ပိုးစာပင်လမ်းသွယ်မှာ ကျွန်တော်တို့ ၂ နှစ်ကျော်ကျော်နေခဲ့ပါတယ်။ ပိုးစာပင်အသားကနေလုပ်ရတဲ့ မှိုင်းခံစက္ကူဆိုတာ ခုခေတ်မှာ အသုံးနည်းလာတယ်။ တကယ်အသုံးကျတယ်။ မီးပုံးပျံ လုပ်ရာမှာ သုံးတယ်။ ကန်တော့။ အမျိုးသမီးတွေ ရာသီလာချိန်မှာ အခုအခံ လုပ်နိုင်တယ်။ မွေးရာပါ အာခေါင်ပေါက် ပါသူတွေ အပ
ဖိုးမောင်လာနေပြီကွလို့ ပြောစရာမလို။ ရောက်နေနှင့်ကြတဲ့ အဖေါ်တွေက ကုန်းအမြင့်ပေါ်တက်လာတဲ့ ဖိုးမောင်ကို အထင်အရှားမြင်နိုင်ကြတယ်။ မှိုင်းပြာမှောင်နေတဲ့ ကောင်းကင်နောက်ခံကြောင့် ဖိုးမောင်ရဲ့ တပတ်နွမ်းရှပ်အဖြူဟာ ပိုပြီးသစ်လွင်နေတယ်။ ဖိုးဆောင် ဒီကောင်ကွာ မိန်းမ မရှိတော့ ပေါ့ပါးနေလိုက်တာ။ ငါ့မှာတော့ ဗိုက်တလုံးနဲ့မိန်းမကို ထားခဲ့ရတာ ဗိုက်သုံးလုံးစာ အတွက်မို့သာ။ အဲတာနဲ့ အရင်လူတွေနဲ့လိုက်ဘို့ရာ အထမမြောက်ခဲ့ဘူး။ အခုတောင် အိမ်ပြန်ရကောင်းမလား စဉ်းစားနေသူက ဖိုးဆောင်။ ဖိုးအောင် ဖိုးမောင် မင့်မှာ ယူစရာတွေ စုံရဲ့လား။ ဓါတ်ပုံရိုက်ခဲ့တယ်နော်။ ပတ်စပို့ဆိုက်။ သူကြီးဆီက စာကောပါလား။ ငွေကတော့ လုံလောက်အောင် မပါလို့ကမဖြစ်။ တို့အားလုံး အတူတူနဲ့ အနူနူချည်းပဲကွ။ စေ့စပ်ပြီး စာရင်းဇယားတွက်ချက်တာမှာ အထုံပါတဲ့ ဖိုးအောင်က လှမ်းပြောလိုက်တယ်။ ဖိုးထောင် သူတို့ထဲ စာဖတ်အများဆုံး ဖိုးထောင်ကတော့ သူဖတ်ဖူးတဲ့ ရွက်ဝါတောမှာ လမ်းနှစ်သွယ်ဆိုတဲ့ ဘာသာပြန်ကဗျာကို အမှတ်ရနေတယ်။ ကဗျာထဲက ခရီးသည်ဟာ လမ်းနှစ်သွယ်မှာ လူသွားလူလာနည်းတဲ့လမ်းကို ရွေးခဲ့တယ်။ သူရွေးတဲ့ လမ်းတလျှောက် အရိပ်အောက်မှာ ခိုနားတယ်။ ပူလောင်တာကို ရင်ဆိုင်ရတယ်။ လေပြင်းနဲ့တွေ့ရတယ
တမြန်နှစ်က ဒီလိုနေ့မှာ မုံရွာ သာစည်လမ်းစျေးဘက် လမ်းလျှာက်ထွက်တယ်။ စမ်းတမ်းစမ်းတမ်း ဟိုမေးသည်မေးနဲ့ သူငယ်ချင်းအိမ် ရောက်သွားတယ်။ ရောက်တာနဲ့ သူ့စာအုပ်ပုံကို ရှာတယ်။ ဖုံတလုံးလုံးနဲ့ အဖုံးမပါတဲ့ စာအုပ်တွေထဲမှာ မြန်မာစာသတ်ပုံမှန်တာာ တွေ့ရတယ်။ ကျေးဇူးရှင် လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီး ဆုံးမစာ။ တရားမကြွယ်၊ အထုပ်ငယ်လျက်၊ အပါယ်စခန်း၊ သွားမြဲလမ်း၌၊ တပန်းဟိုက်ဟိုက်၊ တရှိုက်ငင်ငင်၊ တငြင်ငြိုငြို၊ ဆင်းရဲပိုလျက်၊ ထိုထိုဘဝ၊ အနန္တလျှင်၊ အစမဆုံး၊ အမျိုးထုံးတည့်၊ အနှုန်းမပျက်၊ အောက်နရက်ဝယ်၊ တသက်နွယ်နွယ်၊ အမြစ်တွယ်သို့ အပါယ်ထိုထို၊ ဥဒဟိုသည် နင်လိုလုမိုက် သွားလမ်းတည်း။ လယ်တီဆရာတော်ကြီး စင်္ကြ ံလမ်းနေရာလည်း ရောက်ခဲ့တယ်။ ဦးချကန်တော့ခဲ့တယ်။ ငယ်ငယ်ကတော့ အဆောက်အဦ မရှိပါ။ ဆော့ကစားခဲ့တဲ့ နေရာ။ တရားမကြွယ် အထုပ်ငယ်လျက် - ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၁-၆-၂၀၁၈ ၁-၆-၂၀၂၁
Comment ကွန်မင့် ပိတ်ထားတာ ကြာပြီ
ဆရာရေးတဲ့ စာတွေမှာ မှတ်ချက်ဝင်ရေးလို့ မရပါ။ ကွန်မင့် ပိတ်ထားတာ ကြာပြီ။ အတော်များများက စာတလုံးမှမရေးပဲ အရုပ်တွေတင်ကြတယ်။ အတော်များများက မဆီမဆိုင်တွေလာရေးကြတယ်။ မင်းရှင်းဆိုတာကလည်း တဒုက္ခ။ ပို့စ်တင်တဲ့သူက မသိတဲ့သူတွေ လာပြီး အပြန်အလှန်စာတွေရေးနေကြတာ။ ဖျက်နေရတာက အလုပ်ကြီးတခု။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ဝဲတိုင် ဆိုတာ ဘာလဲ ဆရာ။ ရှာနေဆဲ။ ဝဲတိုင်က အခုစာနဲ့ ဆက်စပ်မယ် ထင်ပါတယ် ဆရာ။ ရှာဖွေပေးသူက ဘုန်းတော်ကြီးတပါ။ ကျေးဇူးပါဘုရား။ ဒေါ်မြမြအေးနဲ့ အဖြေရှာကြတယ်။ အိမ်မကြီးရဲ့ ဘေးကနေ အဆွယ်ချတာကို ဇောင်းလို့ခေါ်တယ်။ အကာလည်း ပါတယ်။ ရှေ့မှာ အမိုးသာပါပြီး အကာမပါတာကို ဝဲ သို့မဟုတ် ပရပ်လို့ ခေါ်တယ်။ နောက်ဘက်မှာလည်း ဇောင်း။ ကျွန်တော်တို့မိဘအိမ်ကို နယ်က အမျိုးထဲက ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလာပြီး စာသင်ကြတော့ လူကများတယ်။ အိမ်ဘေးမှာ ဇောင်းချရတယ်။ အိမ်ရှေ့မှာ ပရပ် ခေါ် ဝဲထိုးထားရတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဝဲတိုင်ကိုမှီခဲ့တယ်။ မှီဆိုတာ မှီခိုတာ မီ မဟုတ်ပါ။ လွဲရေးသူတွေ များတယ်။ လူကလေးရယ် အိပ်ချင်ပြီ ဝဲတိုင်ကို မှီ။ အိပ်ချင်ပြီကွဲ့ စပယ်ကုံး လွှဲကြပါအုံး။ လူကလေးရယ် အိပ်ချိန်တန် ဗျိုင်း ရှေ့ကပျံ။ လူကလေးရယ် အိပ်ချိန်နီး ဗျိုင်း ရှေ့ကဆီး။ လူကလေးရဲ့ မျက်တောင် မြှေးယောင်ယောင်။ မျက်တောင်ကွဲ့ ပေမြှေး အိပ်ပါတော့ လေး။ ဒီသီချင်းကို သားအကြီးဆုံးကတည်းက မြစ်မလေးအထိ ဆိုပြီး သိပ်ခဲ့တယ်။ ဆိုတတ်သမျှသီချင်းကလည်း ဒါဘဲ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ကျွန်တော့ရုံးမှာ အလုပ်လုပ်ပြီး နယူးဒေလီမှာ ကျန်ရစ်သူကို လှမ်းမေးတာ။ ဟုတ်ကဲ့ ကောင်းကြတယ်ဆရာ။ ခုလိုချိန်မှာ အလိုအပ်ဆုံးဆုဆိုရင်လည်း အာရောဂျံ ပရမံ လာဘံ ပဲဆရာ ကျန်တာတွေက ရှာကြံပြီး ဖြေရှင်းလို့ ရသေးတယ်။ အာရောဂျံ ပရမံ လာဘံ = ကျန်းမာခြင်းသည် လာဘ်ကြီးတပါးဖြစ်သည်။ အာရောဂျံ = အနာရောဂါ၊ ပရမံ = မြတ်သော၊ လာဘံ = လာဘ်မည်၏။ အာရောဂျာ ပရမာ လာဘာ လို့လည်း ရေးနိုင်တယ်။ ၂၀၁၈ မြန်မာပြည်ကိုအလည်ပြန်တော့ ဦးလေးအရင်းဆရာတော်ကို မပြန်ခင်နှုတ်ဆက်တယ်။ မောင်တင့်ဆွေ ကျန်းမာရေးက နံပါတ်တစ်။ မကျန်းမာရင် ဘာမှ လုပ်မရဘူးလို့ ဆုံးမလိုက်ပါတယ်။ စာဖတ်ရသူတွေရော မဖတ်ရသူတွေပါ ကျန်းမာကြပါစေ။ ဝီကီပီးဒီးယားမှာ မြန်မာလိုရော အင်္ဂလိပ် အော်တိုဘာသာပြန်ပါတွေ့တယ်။ Allergies Meaning Health isabig bribe. (Allergen = disease, primordial = noble, bribe = bribe.) အလာဂျီ တဲ့။ ထိုးတဲ့လာဘ် တဲ့။ အတော်ကို လွဲမှားတယ်။ လာဘ ဆိုတာ ရခြင်း။ လာဘ်ရခြင်း။ ဆုလာဘ်။ အမြတ်အစွန်း။ လာဘ်ထိုးတာ မဟုတ်။ အော်တိုဘာသာပြန် ကျန်းမာကြပါစေ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ဒီလို မေးခွန်းတွေမေးတာ အံ့သြမဆုံးဘူးဆရာ။ ခေတ်စနစ်ကြီးကို တကယ်ပဲ စိတ်ပျက်မိတယ်။ အိမ်ထောင်သက်တမ်း လို့ရေးရကြောင်း ဖြေလိုက်တယ်။ ထပ်စဉ်းစားရပြန်တယ်။ အိမ်ထောင်သတ်တမ်းလို့ရေးတာကို မှားတယ်လို့ ပြောမရပြန်။ လင်မယားနှစ်ယောက်က မတည့်ကြလို့ နေ့တိုင်းလိုလို သတ်ပုတ်နေကြသလားပါ စဉ်းစားရတယ်။ အဲဒါသာမှန်ရင် (သတ်တမ်း) လည်း မှန်ပြန်ရော။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
၁။ ခင်ငူဂေါ ဒေါပုံဝ လို့ မှတ်သားမိပါတယ်။ ခ င ဂ ဒ ပ ဝ တို့မှာ မောက်ချ (-ါ) လို့ မှတ်ထားပါတယ်ခင်ဗျ။ အဲဒါ အပြည့်အစုံ မမှန်ကြောင်း ၄-၅ ခါ တင်ပြထားတယ်။ နမူနာပုံတွေလည်း တင်တယ်။ (ခ င ဂ ဒ ပ ဝ) မဟုတ်တဲ့စာလုံးတွေကို (-ာ) သာချရမယ်လို့ ဆက်သင်ရင်တော့ လွဲတယ်။ ၂။ မင်္ဂလာပါဆရာ သိချင်တာလေး မေးခွင့်ပြုပါ ကျွန်တော်ငယ်စဉ် ကျောင်းသားဘဝက သင်ခဲ့ဖူးတာလေး မေးပါရစေ။ ငယ်စဉ်က ခ ဂ င ဒ ပ ဝ ဝိုက်ချမသုံးရ မောက်ချ အသုံးကြလို့ သင်ခဲ့ရပါတယ် ယခု ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ထုတ်ပြန်ချက်မှာ နေ့စဉ် ဘဝမှာ ခပ်ခွာခွာနေပါဆိုပြီး တွေ့ရပါတယ် ဆရာ ခွါ နဲ့ ခွာ ဘယ်ဟာ အမှန်လဲ သိပါရစေ ဆရာ။ ၃။ ဖေါက်ဖေါက် နဲ့ ဖောက်ဖောက်က ဘယ်ဟာအမှန်လဲ ဆရာ။ မေးလိုတာက ရေးချ ခေါ် မောက်ချ နဲ့ ဝိုက်ချ နှစ်မျိုးဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ရေးချ ၂ မျိုးစာ မကြာခဏတင်ထားတယ်။ ဖေါ်မြူလာလိုတော့ မသုံးနိုင်ပါ။ ဝဆွဲပါရင် ၂ မျိုး သုံးနိုင်တယ်။ ဓါလို့ ရေးနိုင်တာ များတယ်။ ခ င ဂ ဒ ပ ဝ ဆိုတဲ့ ၆ လုံးကို ( ါ) သုံးရမယ်လို့ ခုခေတ်မှာ သင်တယ်လို့ တဆင့်သိရတယ်။ ကျွန်တော်က အဲဒီထုံးအတိုင်း မလိုက်တဲ့အခါ ထောက်ပြကြတာ ဆယ်ခါလောက်တော့ရှိပြီ။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာစာသင်တော့ အဲလို မသင်ခဲ့ပါ။ ဆယ်တန်းရောက်တော့ ဓါတ
ဘား နှင့် ဖါး
၁။ ဖား နဲ့ ဖါး ကွာခြားပုံ မထူး တမူး ၂။ ဆရာ ဘားကဘာကိုဆိုလိုတာပါလဲ။ ဘားနဲ့ဖားက အက္ခရာမတူ အဓိပ္ပာယ်တူလားသိချင်ပါတယ်။ ဖါးရော ဘားပါ ရေးကြတယ်။ ဘား ကျွမ်းဘားကစား ဘားခုန် ဘားဆင်း = မညီမညွတ် ချွတ်ယွင်းသည် ဘားတင်္ဂါဟူ၍ ဘကုန်းနှင့်လည်းရှိသည်။ (ဘောကာ = ဘား) ဘားနဒ် ပိဋကတ်တိုက် ဘားပြုပ် ဘားသတ္တဝါ ဘားကောင်စီ ဖါး ကျုံဖါးရွာ စွပ်ဖါး စားဖါး ဖားခုံညင်း ဖါးခုန် ဖါးဆင်း = ဘားခုန်ဘားဆင်း = မညီမညွတ် ချွတ်ယွင်းသည် ဖားစည် ဖားတလက် ဖါးပျံ ဖါးဖါးရှည်ရှည် ဖါးဖါးဝေဝေ ဖါးပြုပ် ဖားပြုပ်ဆုတ်ဆိုင်းပင် ဖားလားချ (အွန်လိုင်းသတ်ပုံ) ဖါးလျားကျသည် ဖါးလျားဆံပင် ဖါးလျားလျား ဖါးအံမြို့ ဖါးကောက် ဖါးကောင် ဖားလောင်းကောင် သစ်နှာဖါး အပ်နှာဖါးပေါက် မော၍ဖါးနေသည် နွားနှာဖါးကြိုး ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ဇွန်လဟာ နှစ်တနှစ်ရဲ့ ဆဋ္ဌမလဖြစ်တယ်။ ဆဋ္ဌမဆိုတာ မြန်မာစာလုံးမဟုတ် ပါဠိ။ ဆဌမလို့ရေးတာ မှားတယ်။ ခြောက် (၆) တန်းကို ဆဋ္ဌမတန်းလို့ ရေးမှသာ မှန်တယ်။ ဆဋ္ဌသံဂါယနာတင် ပိဋကတ်တော် အ ဋ္ဌမ (ပါဠိ) = ရှစ်ခုမြောက်၊ ရှစ်ကြိမ်မြောက်။ ပဌမ (ပါဠိ) = ဦးစွာဖြစ်သော။ အစအမွန်ဖြစ်သော။ တခုမြောက်။ ပထမ ( သင်သကရိုက် ၊ သက္ကတ၊ ဆန်းစ်ခရစ်) = တခုမြောက် နောက်ပေါ်သတ်ပုံကျမ်းနဲ့ နောက်ပေါက်မြန်မာစာဆရာတွေက ပထမလို့ တမျိုးတည်းသာ ရေးခိုင်းနေတာ မသင့်မြတ်ပါ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
Lady Godiva syndrome ကိုယ့်ဟာကို သူများပြချင်သူ
(ကန်တော့) တနှစ်ကဒီရက်တွေမှာ ရှယ်တာတွေများလှတဲ့သတင်းတခုရှိတယ်။ အဆင့်အတန်းခွဲခြားမှုကို ဆန့်ကျင်သည့် ကိုယ်တုံးလုံး ကမ္ဘာပတ်စက်ဘီးစီးအသင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိမည်။ ကိုယ့်ဟာကို သူများပြချင်သူစာကို မီဒီယာတခုကိုပို့ပါတယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာတော့ အစုံမတင်သင့်လို့ ပို့စ်မလုပ်တော့ပါ။ စာမြီးတော့ တင်ပါရစေ။ အိတ်စ်ဘီးရှင်းကို ပြပွဲလို့ခေါ်တာ လူတိုင်းသိပါတယ်။ ပြတယ်ဆိုတာ သူများမြင်စေချင်လို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ ဆေးပညာမှာ အိတ်စ်ဘီးရှင်းနဇင်ဆိုတာကတော့ သူများမမြင်စေအောင် ဖုံးထားရမှာကိုမှ တမင်တကာပြချင်တဲ့စိတ်အရ လုပ်တာကို ခေါ်တယ်။ သစ်သီးဝလံပြပွဲလိုမျိုး ပြတာမဟုတ်ဘူး။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မူမှန်မဟုတ်တာ ပါရာဖိလပ်စ်စိတ်ရောဂါတွေထဲက အမျိုးအစားတခုပါ။ ကမ္ဘာကိုလှည့်ပတ်တဲ့အလေ့အထကနေ ကမ္ဘာရွာဖြစ်လာစေတာမှာ အကောင်းနဲ့အဆိုး ဒွန်တွဲနေတယ်။ ကမ္ဘာရွာသူတွေက မြန်မာပြည်လာမယ်တဲ့။ ကိုယ့်ဟာကို သူများပြချင်သူတွေက ညကလပ်နဲ့ ဘားတွေမှာ အဲဒီလိုလုပ်ကြတယ်။ ဒါမှ လူစည်မှာမို့။ ဒါပေမယ့် ဗလာကပြအသုံးတော်ခံတဲ့ မိန်းကလေးတိုင်းက အဲဒီဝါသနာရှိတယ်လို့တော့ ပြောမရဘူး။ စားဝတ်နေရေးအတွက် လုပ်ကြရတာရှိတယ်။ မိန်းမတွေက အင်္ဂါဇာတ်ကလွဲရင် အကုန်ပြချင်တယ်။ ယောက်ျားများက ဘာတ
ဓဝယ် ရခိုင် ရွှေတောင်ပိုး ညီကလေး ထိပ်ကိုထိုး မငိုအောင် ဖြေးဖြေးထိုး ဓဝယ် ရခိုင် ရွှေတောင်ပိုး။ ကိုအေးနဲ့ မခွေး ကိုအေးနဲ့ မခွေး ရေခပ်ဖျု့ တောင်ပေါ်ပြေး ကိုအေးလဲရာ ခေါင်းကွဲရှာ နောက်မှာ မခွေး ဒလိမ့် ခေါက်ကွေး။ တစ် နှစ် အင်းကျီဝတ် တစ် နှစ် အင်းကျီဝတ် သုံး လေး တံခါးပိတ်ပေး ငါး ခြောက် တုတ်တွေကောက် ခုနစ် ရှစ် တည့်တည့်ပစ် ကိုး တဆယ် ကြက်မကြီးကိုဝယ်။ အရင်က သတ်ပုံတွေကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
Beer အလိမ်အညာဘေးက ဝေးကြပါစေသတည်း
တွေ့ပြန်တယ်။ ဘီယာထဲမှာပါတဲ့ ဓါတ်တမျိုးက အသည်းနဲ့ အူမကြီးကင်ဆာအကျိတ်တွေကို သတ်နိုင်ကြောင်း သိပ္ပံပညာရှင်များတွေ့ရှိ တဲ့။ အဲလို မဟုတ်ကဟုတ်က အလွဲအမှားသတင်းတွေ ခဏခဏထွက်တယ်။ အရက်ရောင်းချင်သူတွေက ရေးခိုင်းတာတွေ။ ဘီယာသမိုင်းဟာ ဘီစီ ၅၀၀၀ ကတည်းကလို့ အီဂျစ်ကရတဲ့ အထောက်အထားတွေက ဆိုပါတယ်။ အဲလိုသာ မှန်မယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာမှာ ကင်ဆာရောဂါ ပေါ်လာစရာအကြောင်း မရှိလောက်ပါ။ ကင်ဆာပဌမဆုံးလူနာကို ၁၇၇၅ ခုနှစ်မှာ ဗြိတိသျှခွဲစိတ်ဆရာဝန် ဒေါက်တာ Percivall Pott ပါစီဗယ်လ်ပေါ့က တွေ့ပါတယ်။ ယောက်ျားကပ်ပယ်အိပ်ကင်ဆာ။ ကန်တော့။ ဘီယာထဲဖြစ်ဖြစ် ဝိုင်ထဲဖြစ်ဖြစ် ထန်းရေထဲဖြစ်ဖြစ် အယ်လ်ကိုဟော ပါတယ်။ နည်းတာများတာနဲ့ တခြားဟာတွေပါ မပါသာ ကွာတယ်။ အယ်လ်ကိုဟောနဲ့ ကင်ဆာဆက်စပ်မှု အခိုင်အမာရှိတယ်။ Carcinogens ကာစီနိုဂျင်လို့ ခေါ်တယ်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်စာရင်းတွေအရ အမေရိကမှာ ကင်ဆာနဲ့သေဆုံးသူ ၁၉၅၀၀ ယောက်ထဲက ၃့၅% ဟာ အရက်နဲ့ ဆက်နေကြတယ်။ ဆောရီး။ Head and neck cancer ဦးခေါင်းပိုင်းနှင့် လည်ပင်းပိုင်းကင်ဆာဟာ အရက် အသင့်အတင့်သောက်သူတွေမှာ ၁့၈ ဆ ပိုဖြစ်ကြတယ်။ များများသောက်သူတွေမှာ ၅ ဆပိုတယ်။ Esophageal cancer အစာမျိုပြွန်ကင်ဆာ ၁့၃ ဆ နဲ့ ၅ ဆပိုဖြစ်ကြတယ်။ Live
ညနေမှာ လမ်းပြင်တယ်။ မပြီးခင် ဧည့်သည်တော်ရောက်လာတယ်။ အဲဒီလမ်းအကူးနေရာက မရွှေရည်နဲ့ အမရာတို့အတွက် ပြင်တာ။ အမရာက အုတ်ခဲတချပ်စီ နှစ်ခါသယ်ပေးတယ်။ ဟဲဗီးတဲ့။ အမရာ တနှစ်ကြီးလာပြီး သူ့ 44 တနှစ်ပို အိုလာပြီ။ ခင်းထားတဲ့လမ်း မပျက်ပါ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၃၁-၅-၂၀၂၀ ၃၁-၅-၂၀၂၁
တနေ့တွင်မူ (ပုသိမ် အေးကျော်) တချိန်က ပုသိမ်မှာ သတ်ပုံမှန်နဲ့ ရေးခဲ့တယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
လာပို့တယ်။ ကျေးဇူး။ သူတို့သားက ၁၂ တန်းဂရက်ဂျူယိတ်ဖြစ်လို့တဲ့။ ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်း။ ကျောင်းပြန်ဖွင့်ရင် ကောလိပ်။ ကနေ့လာပို့တဲ့ ထောပတ်ထမင်းက ကျွန်တော်တို့ချက်နည်းနဲ့ မတူပါ။ တခြားစားစရာတွေလည်း နေရာဒေသအလိုက် ချက်နည်း မတူတာတွေရှိတယ်။ မနေ့ကပဲ မရမ်းပြားနဲ့ ကြက်သားချက်တာကို ကိုယ်သိတဲ့ မွန်နဲ့ ထားဝယ်စာလို့ ရေးမိတာ။ ရခိုင်မှာလည်း မရမ်းပြား စားတယ်တဲ့။ သုတဆိုတာ ရှာလို့မကုန်နိုင်။ ထောပတ်အကောင်းဆုံးက ငါန်းဇွန်နဲ့ မြို့သာ။ ကျွန်တော် (၆) နှစ်ကြာတာဝန်ကျခဲ့လို့ ကောင်းကောင်းသိတယ်။ တိုက်နယ်ဆရာဝန်အိမ်မှာ ထောပတ်ပုလင်းတွေ ထားစရာနေရာမရှိ။ ကျေးဇူး။ ထောပတ်ထန်းလျက် ကောင်းမှကောင်း။ ထောပတ်ထမင်း ချက်စားတယ်။ ကောင်းမှကောင်း။ တိုက်နယ်ဆေးရုံကနေ ကလေးတွေအာဟာရအတွက် ထောပတ်ထမင်းကျွေးခဲ့တယ်။ အဲဒါကတော့ UNICEF က ရတာ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
လူကလေးတဲ့ ချော့စရာ မိတ္တီ္ထလာ ကန်တော်အောက်က ဖါး ကောက်ခဲ့ပါ ဖါးပါရင် တကောင်ပေးပ မျက်လုံးရယ် ကြောင်တောင်တောင်နဲ့ ဖါးကောင်ကသေး။ တချို့က ဖါးလို့ရေးရင် အုံးအင်မအော်တတ်တဲ့အကောင်လို့ ထင်ကြတယ်။ မြန်မာစာလည်း နေကောင်းပါစေ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
မက်ဆေ့ချ်တခု - မြန်မာစာ သတ်ပုံအရေးအသားကို မသိနားမလည်ပဲ လက်မခံတတ်သူတွေကို ဆုံးမသင့်တဲ့။ ဖတ်မိသူတွေ တချို့ က ထပ်ပြောစရာမလို မှားတာကို ပြင်ကြတယ်။ တချို့က ရှေးကရေးတာတွေက ခေတ်ဟောင်းတဲ့။ ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီတဲ့။ ဆက်မှားလော့တဲ့။ တချို့အတွက်တော့ ကမ္ဘာကြီးလို။ ကျောင်းမှာ လုံးဝန်းပြီး အိမ်မှာပြား၏။ နိုင်ငံရေးနဲ့ မြန်မာစာ ဆင်တာတချို့ရှိတယ်။ အရပ်ထဲမှာ အဓမ္မ၊ စစ်တပ်ထဲမှာ တသွေး တသံတမိန့်တဲ့။ မူကွဲမရှိစေရတဲ့။ ဒါဆိုဒါပဲတဲ့။ ပဌမ မှားပြီး ပထမသာ မှန်သတဲ့။ သမတ မှားပြီး သမ္မတသာ မှန်သတဲ့။ တစ်မတ်သာ တန်ဖိုးရှိသတဲ့။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
Chemotherapy (ခီမို) အတွက် (၁၅) ချက်
၁။ ခီမိုဆေးဒဏ်ကိုခံနိုင်အောင် ဘာအားဆေးသုံးသင့်ပါသလဲခင်ဗျာ အသက်အရွယ်အရ အစားအသောက်နည်းလို့ပါ ၂။ ကျွန်မအမေက အူမကြီးကင်ဆာနဲ့ chemo ၈ကြိမ် သွင်းရမာ (မှာ) ခု၆ကြိမ်နဲ့ ၂ပတ်နောက်ဆုတ်နေရပါတယ် Platelet count ကျနေလို့ပါ သွားဖုံးရောင် သွေးယို အညိုရောင် အမဲရောင်အကွက်ဒွေ (တွေ) ပေါ် နေပြီး အရမ်းမောနေပါတယ် အမြန်သက်သာအောင် ဘာဒွေ (တွေ) စားပြီး Platelet တက်အောင်လုပ်ပေးရမလဲ အကြံပေးကျပါအုံး (အကြံပေးကြပါအုန်း) ကျွန်တော့ကိုမေးတာတော့ မဟုတ်ပါ။ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ဘယ်သူဖြေဖေသြဘော မေးထားတာ။ ပို့စ်မှာသုံးချင်လို့ သတ်ပုံတော့ ပြင်မယ်။ ဆောရီး။ • Chemotherapy (ခီမို) လို အတိုကောက်ခေါ်တဲ့ (ခီမိုသာရာပီ) ဟာ ကင်ဆာ (ဆဲလ်) တွေကို သတ်တဲ့ ဓါတုဆေးတွေ ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ • ကင်ဆာကို ဆေးပေးကုသနည်းရဲ့ အခြေခံကျတဲ့ ဆိုးဝါးတဲ့အချက်တခုကတော့ ဒီဆေးတွေက ဘာဆိုဘာမှ မရွေးဘဲ၊ ဘာတခုမှ ကြည့်မနေဘဲ၊ မျက်နှာမလိုက်ဘဲ၊ ဖျက်ဆီးပြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်။ • ကင်ဆာဆေးရွေးတဲ့အခါ ကင်ဆာအမျိုးအစားနဲ့ ပြန့်နေတဲ့သဘောသဘာဝကို ကြည့်ရွေးရတယ်။ • တချို့ဆေးတွေက (ဆဲလ်) အဆိုးတွေရဲ့ (ဒီအင်အေ) ကို တိုက်ရိုက်ဖျက်ဆီးတယ်။ တချို့ဆေးတွေက (ဆဲလ်) အဆိုး မျက်နှာပြင်မှာရှိတဲ့ အချက်ပြနေ
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကလောင်အသင်း ၁၉၆၃ ခုနှစ်ထုတ် (၁၁) ဗေဒါတဲ့ ဗေဒါ ဒီချောင်းမှာ အမည်မွှေး၊ အေးငြိမ့်သာယာ မွှေးသမျှ ပြန်တရာ၊ ခံစရာ အရေး အတိုက် ခံနိုင်မှ၊ အမွှေ့ ခံနိုင်မှ ထိုးဝါးကိုင် ဒီဆိုင်ဝဲတဲ့ ရွှေဘဲရန် စုန်ဆန်လမ်းမှာ ရမ်းတတ်တယ် လေး။ မွှေးမှလဲ မဟုတ်ပါ ရိုးသံရှင် ပဲ့တင်ထပ်၊ ချောင်းရပ် ဧရာ စုန်ဆန်ရ လမ်းတကာမှာ၊ လမ်းမသာရှာကြ တစိုက်စိုက်ကယ်နဲ့ အတိုက်ကို အကြိုတွေ့ပါလို့ အမွှေ့ဒဏ် ခံနေကြ၊ တွေးမိပါစ။ ။ ပြန်တရာ၊ လမ်းတကာ၊ တစိုက်စိုက်၊ (တ) တွေကို စမသတ်ပါ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
သက် သတ် သပ်
၁။ အသက် ၃၈ မ အိမ်ထောင်သတ်တမ်း (သက်တမ်း) ၅နှစ်ပါရှင့် ၂။ ဆရာရှင့် တဖက်သတ်လား တဖက်သက်လား ဝေခွဲမရတော့လို့အချိန်ရရင်ဖြေပေးပါ တောင်းဆိုပါတယ်ရှင့် ၃။ ဆရာ ဘယ်လိုစမ်းသက်မှုမျိူး လုပ်ရပါလည်ဆရာ။ ၄။ ရောဂါကို ဆရာဝန်ပြသင့်။ သတ်ပုံကိုတော့ ကျွန်တော်ပြင်ပေးပါမယ်။ စမ်းသပ်လို့သာရေးရတယ်။ ၅။ သေသပ် ဟုတ်ဘူးလားဆရာ။ အသေသတ်ဆိုရင်တော့ တသတ်ပေါ့ မြန်မာစာတော်တော်ခက်တယ်ဗျာ။ ၆။ ဆရာ သပ်ဆိုတဲ့ အသုံးအနုန်း ဘယ်လိုသုံးရတယ်ဆိုတာလေးရေးပေးပါ ဆရာ။ ၇။ ကျနော့်အသက် ၄၆ နှစ်ရှိပါပြီ။ ကျနော် ညာဘက်လက်နှင့် စာရေးပါတယ်။ အရင်ကစာရေးရင် အတန်အသင့်လှပြီး သက်သက်ရက်ရက် ရှိပါတယ်။ ၃/၄ နှစ်လောက်ရှိပါပြီ စာရေးရင် ထိမ်းမရဘဲ အောက်ဘက်ကို ဆွဲဆွဲသွာပါတယ်။ အရင်ကရေးသလို သက်သက်ရပ်ရပ်လည်းမရှိ/လှလည်းမလှတော့ပါ။ ၈။ ဆရာ သတ်တု နဲ့ သတ်ထု အကြောင်းလေး သိချင်ပါတယ်။ သက် ခုနှစ်သက္ကရာဇ်၊ ချစ်တဲ့သက်နှံ၊ ချစ်ဖက်သက်လျာ၊ သက္ကတဘာသာ၊ သက္ကလတ်စောင်၊ သက်ကျားအို၊ သက်စွန့်ကြိုးပမ်း၊ သက်ဆိုင်သူ။ သက်ဆိုးရှည်၊ သက်တ့ံရောင်၊ သက်တမ်းရှည်၊ သက်ကြီးခေါင်းချအချိန်၊ သက်ရင်းကြီးပင်၊ သက်လုံကောင်း၊ သက်သတ်လွတ်စား၊ သက်သာချောင်ချိရေး၊ သက်ဦးဆံပိုင်စနစ်။ သက်ရောက်မှု၊ သက်သေပြ၊ သက်သောင့်သက်သာ၊ အ
၁။ အောက်တွင် မျဥ်းသား/မျဥ်းတားထားသော အက်ခရာ (နှစ်လုံးဆင့်ရေးမရလို့ပါရှင်) မျဥ်းသား/ မျဥ်းတား ဘယ်စာလုံးပေါင်းက အမှန်ပါလဲရှင် (အက္ခရာ) ၂။ ကိုယ်ဝန်သားဆေးသိချင်ပါတယ်ဆရာ။ (တားဆေးလို့ရေးရတယ်။) ၃။ သမီး သားဆေးသောက်ထားတယ်ဆရာ။ (တားဆေးလို့ရေးရတယ်။) ၄။ ကျွန်တော်က အဲသည်နှစ်ခုကြား ငါမျဉ်းမသားရဲလို့ရေးတာအောက်မှာ မေးတာတခုတွေ့တယ်။ မျဉ်းမတားလားတဲ့။ မျဉ်းသားသည်လို့ ရေးပါတယ်။ စာရေးသားသည်လို့သဘော။ တားက တားဆီးတာ။ သား သားစဉ်မြေးဆက်၊ သားမြတ် (ရင်သား)၊ သားရဲတိရစ္ဆာန်၊ သားသည်အမေ၊ သားသတ်သမား၊ သားသမီးလိုချင်၊ သားသားနားနား ဝတ်ဆင်ထား၊ သားဦးကိုယ်ဝန်၊ သားကောင်၊ သားရေဂျာကင်၊ အမျိုးသား၊ ဆွေမျိုးသားချင်း၊ မျဉ်းသားသည်။ တား တားဆီးသည်၊ တားမြစ်သည်၊ ပဋိသန္ဓေတားဆေး၊ ဝါသနာကို မတားနဲ့တော့ရှင်။ ၅။ မင်္ဂလာပါဆရာ အခြားမလပ်လို့ရေးတာ မှန်ပါသလား။ မခြားမလပ်လို့ရေးတာ မှန်ပါသလား ခင်ဗျ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ခြားစာလုံးက ကြိယာဖြစ်တယ်။ ပိုင်းကန့်သည်၊ တသီးတသန့်ဖြစ်စေသည်၊ ကွဲပြားသည်၊ တမျိုးတဖုံဖြစ်သည်။ မခြား လည်း ကြိယာ။ မခွဲခြားပါနှင့်။ မခြားပဲ (ကြိယာဝိသေသန) ရေးသည်။ မြန်မာစာလုံး အတော်များများမှာ အ ထည့်ရင် နာမ်ဖြစ်သွားတယ်။ အခြား။ အပိုင်းအခြား။ ခ
Pus ပြည်ပေါက် ပျောက်ပြီ
၁။ ဆရာခင်ဗျား၊ ကျွန်တော်က အထိုင်များပါတယ်၊ မြီးညောင့်ရိုးနားမှာ အနာစိမ်းလိုမျိူးပေါက်နေတာ ၃ နှစ်လောက် ရှိပါပြီ၊ တခါတခါ ပြည်တည်ပါတယ်၊ ဆေးခန်းပြတော့ ပိုးသတ်ဆေးသာ သောက်ခိုင်းပါတယ်၊ ခွဲလိုက်သင့်လားခင်ဗျာ။ အဖုက ပိန်သွားလိုက် နောက်ကျ ဖောင်းလာလိုက်နဲ့ အနေရခတ်ပါတယ်။ တသက်လုံးမပျောက်ပဲ ဖြစ်နေမှာ ကြောက်လို့ပါ။ ဖြေကြားပေးပါခင်ဗျာ။ အသက် ၂၉ အမျိုးသားပါခင်ဗျာ။ ၂။ မင်္ဂလာပါဆရာ၊ ကိုယ်ဝန်နှင့်တုန်းက ဆရာ့ကိုသိလိုတာတွေမေးဖူးပါတယ်ရှင့်။ ကျွန်မအသက် ၃၁နှစ်ပါ။ ကလေးမွေးထားတာတစ်လကျော်ပါပြီ။ ခွဲမွေးထားတာပါ။ ကျွန်မသိချင်တာကသားလေးရဲ့နို့သီးခေါင်းမှာပြည်ဖုလိုမျိုးတွေ့နေလို့ပါရှင့်။ ယောက္ခမကတော့ပြောတယ်။ ညစ်ထုတ်ပေးရတယ်တဲ့။ ညှစ်လိုက်ရင်နို့ရည်လေးတွေထွက်လာတယ်ဆရာ။ အဲဒါညစ်ရမလား ဒီတိုင်းဘဲထားရမလားရှင့်။ ဆရာနှင့်ဆရာ့မိသားစုကျန်းမာကြပါစေ။ ပြည်ဆိုတာ ဘယ်နေရာမှာရှိရှိ ထွက်စေအောင်လုပ်ရတယ်။ ပိုးသေဆေး + အနာသက်သာဆေး လိုနိုင်တယ်။ ကလေးငယ်တွေဆေးပေးတာ သတိထားရတယ်။ ၃။ သမီးအသက်က ၃၁ နှစ်ပါ။ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မှာ နေထိုင်ပါတယ်ရှင်။ ကိုယ်ဝန် ၈ လရှိပါပြီဆရာ။ ခုသွားကိုက်ပြီး ပါးပါရောင်နေတာ တပတ်လောက်ရှိပါပြီ။ သွားဆရာဝန်ကိုပြတော့ Enzdase နဲ
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကလောင်အသင်း ၁၉၆၃ ခုနှစ်ထုတ် (၇) တေးမျိုးရယ် စုံ၊ ကုန်နိုင်ပါလေဘဲ။ (ပဲ မဟုတ်ပါ။ မနောက်က ဘဲ မလိုက်ပါ။) မဗေဒါ စုန်ဆန်မြဲ၊ တေးစုံနဲ့ဘဲ။ (ပဲ မဟုတ်ပါ။ မနောက်က ဘဲ မလိုက်ပါ။) ပြူ့တပြူကို ပြူ့တပြူလို့သာ ရေးပါတယ်။ (စ) မသတ်ပါ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ဆရာမှာလဲ တ နဲ့ တစ် ​ရောဂါ မပြီး​သေးဘူးလားဗျာ လက်ခံပါတယ် မကြာခဏ အပြောခံရရတယ်။ အပြောတော့မဟုတ်ပါ၊ စာရေးပြီးသာ ပြောကြတာ။ အမြင်ကပ်သူတွေက တချို့ ကက်ကက်လန်ရန် တွေ့သူတွေက တချို့ ဆရာဝန်ပဲ ဆေးသာကုပါတဲ့ ဘလော့ရတဲ့အထိ စော်ကားမော်ကား ရေးသူတွေက တချို့ လက်သင့်ခံသူတွေလည်း တိုးတိုးလာတယ်။ ဆက်ရေးနေပါမယ်။ ဖရင်း ၅၀၀၀ ကနေလျှော့တိုင်း နာရီမဆိုင်းပဖြည့်လို့ရသေးတယ်။ ဒေါက်တာသန်းထွန်းကို စစ်ကူတောင်ဦးမယ်။ အများနဲ့တယောက် အများက လွန်တယ်ထင်ပါတယ်တဲ့။ ဘယ်လိုရေးရေး နေမကောင်းလို့ မေးလာရင်တော့ ရောဂါပျောက်ေဆး ပေးပါတယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ကင်ဆာအုပ်စုထဲက အမှတ်မထင်တွေ့တဲ့ သတ်ပုံများ ၁။ ပန်းတိုင်ကိုရောက်ခါနီးပါpအစာဟောင်းအိမ်ကင်ဆာကိုအနိုင်တိုက်လာတာ5နှစ်ပြည့်ဖို့5လအလိုစစ်တိုင်းကောင်းတော့ဝမ်းသာရပါတယ် ၂။ အသားစ စစ်p ရင်လူနာကိုတော့အထူးဂရုစိုက်ဘာ ၃။ အစား၀င်အောင်ကျွေးဘာ ၄။ မိယက်ဖြစ်ရင်လဲ2ကြောင်းပေါ်ပါတယ်နေ ၅။ အသည်းနှင့်အဆုတ်သို့ပျံ့နေသော အူမကြီးကင်ဆာတွင် ရွေးချယ်နိုင်သော ခွဲစိတ်ကုသမှု ၂ မျိုးရှိသည်။ P ဆိုတာ ဘာလဲ https://dr-tint-swe.blogspot.com/2020/12/p.html ပါ နှင့် ဘာ https://dr-tint-swe.blogspot.com/2021/05/blog-post_372.html မီးယပ် နှင့် အာထွာဆောင်း https://dr-tint-swe.blogspot.com/2021/05/blog-post_979.html ပြန့် နှင့် ပျံ့ https://dr-tint-swe.blogspot.com/2021/05/blog-post_399.html အပျော်အပျက် ခပ်လွယ်လွယ် ခပ်ပေါ့ပေါ့ ရေးကြတာတွေကိုတော့ သိပ်မပြောလိုပါ။ ကင်ဆာလိုဆိုးတဲ့ရောဂါဝေဒနာအတွက် ရေးကြ မေးကြ ဖြေကြတာမှာတော့ တည်တည်တန့်တန့် မှန်မှန်ကန်ကန် ရေးကြစေချင်ပါတယ်။ မြန်မာစာကင်ဆာလည်း ပျောက်ကင်းပါစေသတည်း။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ပြန့် နှင့် ပျံ့
ဆရာ ကျယ်ကျယ်ပျံ့ပျံ့ နဲ့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဘယ်ဟာအမှန်ပါလဲဆရာ ပြန့် ကားကားပြန့်ပြန့် ကျယ်ပြန့်သည် ပြန့်ပွါးသည် ပြန့်ဖြူးနေသည် ပြန့်ပြောကြွယ်ဝသည် ဖြန့်၍ ပြန့်သည် သန့်ပြန့်စင်ကြယ် မြေပြန့်ညီညာသည် ပျံ့ ဂုဏ်သင်းပျံ့နှံ့သည် စကားပျံ့လွင့်သည် စိတ်ပျံ့လွင့်သည် ညှင်းညှင်းပျံ့ပျံ့ တန်းခိုပျံ့နှံ့သည် (ယခင်သုံး) ပျံ့ပျူးသည် ပျံ့နှံ့ကျော်ကြားသည် လှိုင်လှို်င်ပျံ့သည် သင်းပျံ့သည် မွှေးပျံ့သည် ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
မီးယပ် နှင့် အာထွာဆောင်း
တခါတော့ တင်ထားတယ်။ ၁၈-၅-၂၀၁၆ နေ့က။ တခြားသူတွေက အခုမှတင်ကြလို့။ သားဖွါးမီးယပ်ပညာ၊ သားဖွါးမီးယပ်ဆေးရုံလို့သာ ရေးရတယ်။ ဆရာဝန့်လက်ရေး ဖတ်မရတာ ပြောစမှတ်ရှိတယ်။ ဆရာဝန်ဆိုင်းဘုတ် ဟုတ်ရဲ့လားမေးချင်တယ်။ အာထွာရာစောင်းစခန်းလို့ ဆိုင်းဘုတ်လည်းရှိတယ်။ ပြန်ရှာာ မတွေ့သေးလို့။ အာထွာဆောင်းကို အာထွာစောင်းလို့ စမ်းသပ်ကရိယာနဲ့ တီးတဲ့တူရိယာ မှားရေးနေကြသူတွေကတော့ ၉၀% လောက်ရှိတယ်။ ကရိယာနဲ့ ကိရိယာက မူကွဲ။ မြန်မာစာ စောင်းနေတာကြာပြီ။ မီးကို လျှာနဲ့ယက် (လျက်) ခိုင်းထားတယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
တရ် သို့မဟုတ် ကုလားသံ
၁။ ကင်ဆာဆေးကိုသောက်နေရတာ လေးကြိမ်မြောက်ရှိပါပီ (ပါပြီ) အစားလဲစားပါတရ် လမ်းကတော့မလျှောက်ချင်ပါဖူး ကင်ဆာဆေးသောက်ရက်နဲ့လဲ CA ကမကျပါဖူးရှင့် တချို့ကလဲ မြွေသည်းခြေနဲ့မြွေသားစားရင် ကင်ဆာရောဂါပျောက်တရ်လို့ပြောနေကြလို့ပါ အ့ဒါ ဟုတ်ပါသလားရှင့် ၂။ ဆရာခများ ကျနော် အသက် ၂၅ ပါ တာချီလိပ် (တာချီလိတ်)မှာ နေပါတရ် ကျနော် ငယ်ငယ်က နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ရှိပါတရ် ကျနော့် အနေနဲ့ ဘယ်လိုဆေးခန်း ဘယ်လိုဆရာဝန် ပြသင့်ပါသလဲဗျ မှားတာရှိရင် အနူးညွန်တောင်ပန်ပါတရ် အဖြေလေးတော့ ကျနော်မျှော်နေပါတရ် ဆရာခများ တရ်လို့ရေးကြတာကို ၃-၄ ခါရေးထားပြီး။ ရောဂါသိလိုရင် ဘလော့မှာ ဖတ်ပါရန်။ ဟု ဆရာ ကျနော် မမြင်လို့ ပါ ဗျ တောင်းပန်ပါ တရ် ဆရာ ၃။ Psorasis လို့ ထင်ပါတရ် အ‌ရေပြားဆရာဝန်‌ပြကြည်‌့ဘူးပါတရ် အပူနာလို့ပဲ‌ပြောပါတရ်ဆရာ နှစ်ချီ‌နေပါပြီ။ ‌ဆေးလိမ်‌းလည်‌း ခဏပဲ‌ပျောက်ပါတရ် အဲဒါ သမီး‌ရောဂါက ဘာ‌ဆေးလိမ်‌းရင် ဘာ‌ဆေး‌သောက်ရင် ပျောက်နိုင်မလဲ ဘာ‌တွေ‌ရှောင်ပြီး ဘာ‌တွေစားရမလဲ သိချင်ပါတရ်ဆရာ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတရ် ၄။ ဆရာ သမီးအသက် က ၂၇ ထဲမာပါဆရာ။ အိမ်ထောင်သက် ၂နှစ် ပြည့်တော့မရ်။ အခု ကလေး လိုချင်လို့ပါဆရာ။ ရာသီကလည်း မမှန်။ ရက်ရှောင်နည်းတွေနဲ့ တူတူနေပါတရ
Slow Heart Rate နှလုံးခုန်နှေးခြင်း
၁။ ဆရာခင်ဗျာ ကျနော် အသက် ၇၁ ပြည့်ခဲ့ပါပြီ ၂၀၁၆ ခုကစပြီး နှလုံးသွေးကြောကျဥ်း ဖြစ်လို့ ဆေးသောက်ရပါတယ် cardivas 6.25mg clodgrel, Nuberol ညကျ cardivas 6.25mg. Atorvastatin, nuberol သောက်ရပါတယ် 2020 အောက်တိုဘာ မှာတော့ သွေးတက် လာပါတယ် 178/180 ထိ အပေါ်သွေး 80/93 ထိ အောက်သွေး တက်ပါတယ် သမားတော်က နိုဝင်ဘာ သွားပြတော့ Losartan 50mg, Trimetazidine MR 35mg မနက်ည ထပ်ဖြည့်ပါတယ် သက်သာပါတယ် သမားတော် က သွေးကျရင် Losartan တကြိမ်ဖြုတ်နိုင်တယ် မှာပါတယ် သွေးတက် ရင် Amilodipine 5mg သောက်ရ တယ် ပြောပါတယ် သက်သာပါတယ် သွေးလည်းကျပါတယ် Losartan တကြိမ်ဖြုတ်ပါတယ် သွေးက ပုံမှန်ပဲ ဒါပေမယ့် heart rate က တခါတလေ 51 ထိကျနေတာ သူငယ်ချင်း ဆရာဝန် မေးတော့ သွေးချိန်မှတ်တမ်း တောင်းလို့ စကရင်ရှော့ ရိုက်ပို့ရပါတယ် အဲ့ဒါ သူက Losartan လုံးလုံး ဖြုတ်ကြည့်ခိုင်းတယ် ပထမတော့ ပုံမှန်ပဲ နောက်ကျတော့ သွေးပြန်တက်ပါတယ် ဆရာ အဲ့ဒါ အရင်သမားတော် မရှိလို့ သမားတော် ပြောင်းပြရပါတယ် နောက် သမားတော်က အကုန် ပြန်စစ်ပြီးတော့ ဆေးပြောင်းပေးပါတယ် ဒါပေမယ့် Diastolic က 60 အောက် ရောက် နေပါတယ် ဆရာ တခါတလေ 51 တောင်ဖြစ်တယ် ပြသနာရှိလားဆရာ စကရင်ရှော့ ရိုက်ပို့ပေးပါ မယ်
Cough Links ချောင်းဆိုး စာများ
မင်္ဂလာပါဆရာ ကျွန်တော့်အသက် ၂၄ အိမ်ထောင်မရှိ ကျွန်တော် ချောင်းဆိုးနှာချေတာတို့ အသက်ကိုအောင့်ပြီး ရှုပ်ချလိုက်တာတို့ဆို ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်နောက်ကျော လက်ပျင်း (လက်ပြင်)အောက်က အောင့် အောင့်နေလို့ဆရာ ဘာရောဂါဖြစ်တာလဲဆရာ တစ်လ (တလ) ကျော်လောက်ရှိပြီ 1. Asthma (1) ပန်းနာ (၁) 2. Asthma (2) ပန်းနာ အဆက် 3. Baby's Cough ကလေးငယ်တွေချောင်းဆိုးရင် l 4. Bronchitis ဘရောင်ခိုက်တစ် 5. Chronic Cough ချောင်းဆိုးနေတာ တလလောက်ရှိပါပြီ 6. Common cold in children ကလေးတွေ အအေးမိရင် 7. Common cold prefers cold noses အအေးမမိချင်ရင် နှာခေါင်းမအေးစေနဲ့ 8. Common Cold အအေးမိရင် 9. Cough Question တခါတခါမှ ချောင်းဆိုးပါတယ် 10. Cough Syrups ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးများ 11. Coughing and Children ကလေးတွေချောင်းဆိုးရင် 12. Coughing into the elbow ချောင်းဆိုးခဲ့ပါသည် 13. Healthy culture ချောင်းဆိုး-လက်ဆေး ယဉ်ကျေးမှု 14. Hemoptysis ချောင်းဆိုး သွေးပါ 15. Homemade Humidifier လက်ဖြစ်ရေငွေ့ပေးနည်း 16. Hospital-acquired infection ဆေးရုံကူးစက်ရောဂါ 17. Influenza (Flu) တုပ်ကွေး 18. Medicine for Pneumonias and Respirator
ခါတလှည့် လာခဲ့ပ ကျုပ်တို့ရွာ ဝေးမကွာ၊ ပြေးလာလျှင် တာမထောက်ပါဘူး ရွာမြောက်က မကျည်းစဉ် ရွာဝင်မှာ ပင်စောင်ချမ်းငယ်နှင့် မြောက်လမ်းကွေ့ အနောက်ဆွယ်မှာ ကြောက်စဖွယ် မျက်နှာထားပါလို့ ရွာသားတွေ အာဏာကြို့ရ မင်းပြည်စို့အိမ် အိုတောင်မှာ အခေါင်စောက်နှင့် တဲကိုလေး။ ဖျားမလွန် နွားခွံအခင်း မြေတလင်းမှာ နေခင်းပျော်အင် လိမ်းကျောက်ပြင်နှင့် ဗိုင်းငင်ဝါဖန် အိမ်လုံးသာ ညံတော့ သန်းယံချိန်ကျော် သူငယ်ချင်းကိုလှ အပျင်းပြေ ဖျော်ရအောင် လုံးတော်ပု ပြောင်းဆန်ကို ပေါင်းလန်အောင် အဖျော်ဟင်းငယ်နှင့် ဦးရင်း ရေမျိုချဉ်းအောင်၊ သွင်းစေ့မယ်လေး။ တပို့တွဲလဖွဲ့ လေးချိုးအောက်မှာ ကွန်မင့်တခုရတယ်။ ရှေးခေတ်ပညာရှင်တွေရဲ့ကဗျာတွေက ကောင်းပြီးသားဘဲ၊ တချို့စကားလုံးတွေ နားမလည်တာက ခက်တယ် တဲ့။ စံနစ်တကျသင်ပေးတဲ့ဆရာတွေက ခက်ဆစ်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ပေးကြပါတယ်။ ကဗျာစာအုပ်တွေမှာ ဝေါဟာရအနက်၊ ဝေါဟာရ လေ့လာချက်၊ စကားပြေ၊ လိုရင်းအချုပ်၊ ဝေဖန်ချက်ပါထည့်တယ်။ ဦးကြီးရေးတဲ့ စပ်ဟင်းချို လွမ်းချင်းကို တင်ပြပါရစေ။ စပ်ဟင်းချို တခါလေလိုက်ခဲ့တော့၊ စရိုက်ကယ်ဘာသာ၊ တို့တောရွာမှာ၊ စားစရာဆန်ထမင်းမှာလ၊ မုရင်းနီတျာနှင့် သီတာရောတဲ့ချိန်ကိုလေး။ စပ်ဟင်းချိုမူ ယုန်ကိုပြက်ပြက်၊
ကွန်မင့်တခုရတယ်။ ကျေးဇူး။ အလယ်တန်းပြဆရာမက လက်ဆောင်ပစ္စည်းပေါ်မှာ အမှတ်တစ်ရလို့ရေးပြီးပေးတယ်ရှင့်။ ပြောရအောင်ကလည်း သူကဆရာမကြီးလေ တဲ့။ နှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။ ကျောင်းသူက အဆင့် (၁) ရလို့လား။ ဒါမှမဟုတ် ၁ မှတ်သာရသလား။ ၁၉၈၃ ခုနှစ် ဒီဇင်္ဘာလထုတ် တေးမဂ္ဂဇင်း ဟိုတုန်းက အမှတ်တရ တကယ်ချစ်မှ အချစ်လို့ခေါ်ပါ ဝေးခဲ့ရတဲ့ နှင်းတညဝယ် ခုခေတ် တမှန်သမျှ ၉၀% လောက်တစ်နေကြတယ်။ တေးဂီတစ် ဖြစ်လာမလား မပြောတတ်ပါ။ ကျွန်တော်သာ မြန်မာစာဆရာဖြစ်ရင် (၁) မှတ်သာပေးမယ်။ အဲဒါကြောင့် မြန်မာစာဆရာ မဖြစ်နိုင်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
သတင်း - ပုသိမ်မြို့က စစ်တပ် တပ်စွဲထားသည့် ကုသိနာရုံဘုရားဝင်းအတွင်း ဗုံးပေါက် (၆) နှစ်ကစာ ပြန်တင်မယ်။ ကုသိနာရုံကို Kushinagar, Kusinagar or Kusinara (ကူစီနဂါး) လိုအသံထွက်မှ ဒေသခံတွေကသိပါတယ်။ အခုချိန်ဟာ ဘုရားဖူးရာသီဖြစ်ပါတယ်။ မဇ္ဈိမဒေသမှာရှိတဲ့ သံဝေဇနိယ လေးဌာန ၁။ ဘုရားလောင်းမွေးဖွါးတဲ့နေရာ လုမ္ဗိနီ၊ ၂။ ဘုရားအဖြစ်ရောက်တော်မူရာ မဟာဗောဓိညောင်ပင်နဲ့ စေတီတော်တည်ရှိရာ ဗုဒ္ဓဂယာ၊ ၃။ ပဥ္စဝဂ္ဂီငါးဦးကို တရားဦးဟောကြာရာ မိဂဒါဝုန်၊ ၄။ ဘုရားမြတ်စွာ ပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်စံရာ ကုသိနာရုံ။ စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင် ဗခမက သန်းရွှေနဲ့အဖွဲ့ အိန္ဒိယကိုလာတော့ ကုသိနာရုံနဲ့ လုမ္ဗိနီကိုလည်း ရောက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့က လာမယ်သိထားလို့ ဆန္ဒပြကြဘို့ရာ ဒေလီကနေ ကားတစီးငှားပြီး ကုသိနာရုံကိုသွားကြတယ်။ မြန်မာဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ မတည်းရဘူးလို့ တည်းစရာနေရာရှာရပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုရာစေတီရဲ့ တခြားဖက်မှာရှိတဲ့ တိဘက် Metha Kuar Shrine ကျောင်းမှာသာ တည်းခိုကြရပါတယ်။ ၂ဝဝ၄ ခုနှစ်တုန်းကပါ။ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကို တညလုံး လုံခြုံရေးတွေက ဝိုင်းထားတယ်။ နောက်နေ့မနက်မှာ ကျွန်တော့်ကို ခေါင်းဆောင်းအဖြစ် ခရိုင်တရားသူကြီးကခေါ်တွေ့ပြီး ဆွေးနွေ
ဒေါက်တာခင်ဗျာ။ မင်းနားတထောင်၊ မင်းမြှောင်တသိန်း ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကား အဓိပ္ပါယ် သိလိုပါတယ်။ မင်းနားတထောင် မင်း၊ ဘုရင်၊ သမတ၊ ဝန်ကြီးချုပ်တို့ဟာ တိုင်းပြည်တခုရဲ့ အမြင့်ဆုံးအုပ်ချုပ်သူတွေ ဖြစ်ကြတယ်။ အစိုးရတိုင်းမှာ သူလျိုထားကြတယ်။ သူတို့က အစီရင်ခံကြရလို့ မင်းလုပ်သူက ရာဇပလ္လင်ပေါ်မှာနေပေမဲ့ သူ့တိုင်းပြည်တွင်းမှာ ဘာတွေ ဖြစ်နေသလဲ သိနိုင်တယ်။ မင်းမြှောင်တသိန်း မင်းအပါးမှာ ကပ်မြှောင်နေသူတွေကို ဆိုလိုတယ်။ အရည်အချင်းမရှိဘဲ ကပ်ဖါးရပ်ဖါးတွေဖြစ်ကြတယ်။ မင်းလိုလိုက် မင်းကြိုက်တင်သူတွေကိုလည်း ခေါ်နိုင်တယ်။မင်း၊ ဘုရင်၊ သမတ၊ ဝန်ကြီးချုပ်တိုင်းအနားမှာ အဲလိုလူတွေရှိတယ်။ ၂၀၂၁ ဆိုရိုးစကား ပြောင်းသွားပြီ။ ဒလံ တထောင်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၃၁-၅-၂၀၂ဝ ၃၁-၅-၂၀၂၁
ကျွန်တော် တသက်မှာ ကျောင်း သုံးကျောင်းသာတက်ခဲ့ဖူးတယ်။ လေးတန်းအထိ မုံရွာ ထန်းလေးပင်မူလတန်းကျောင်း၊ ဆယ်တန်းအထိ မုံရွာ အထက (၂) နဲ့ ဆေးပညာဘွဲ့အတွက် ဆေးမန်း။ ကျောင်းအရေအတွက်နည်းတော့ အပေါင်းအသင်းလည်း နည်းကျဉ်းတယ်။ ဆရာဆရာမတွေလည်း နည်းရှင်းတယ်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်က အလည်ပြန်တော့ မူလတန်းကျောင်းကို တွေ့အောင်ရှာပြီး အရောက်သွားတယ်။ ၁၉၅၄-၅၈ ကဆိုတော့ အနှစ် ၆ဝ ပေါ့။ ကျောင်းသားသစ်လက်ခံနေတဲ့ဆရာမတွေကို ကျွန်တော်က ဆရာမတို့မမွေးခင်းက ဒီကျောင်းသားပါလို့ပြောပြီး မိတ်ဆက်ပါတယ်။ လက်ရှိကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးက အမျိုးထဲကဖြစ်နေတယ်။ မုံရွာမှာ ဘယ်သွားသွား အမျိုးမလွတ်။ သူငယ်ချင်းမလွတ်။ ဖရင်းမလွတ်။ ဆရာမကြီးဒေါ်အေးကြည်ကို သတိရတယ်။ လေးတန်းကတည်းက အင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးတဲ့ဆရာမကိုလည်း သတိရတယ်။ ကျွန်တော်က နာမည်အတိုကောက်စာလုံး တီအက်စ်လို့ရေးတာကို ဆရာမက တီအက်စ်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လို့ စတယ်။ အဲဒီတုန်းက မုံရွာမှာ တီအက်စ်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရှိခဲ့တယ်။ ထန်းလေးပင်ကသူငယ်ချင်း ကြွက်နီ ဘယ်ရောက်နေ မသိ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၃၁-၅-၂ဝ၁၈ ၃၁-၅-၂၀၂၁